Argosy သည်အသစ်တီထွင်ထားသော UK Premier League Football Clubs တွင်အခြေခံအဆောက်အအုံအဆင့်မြှင့်ခြင်းများအတွက် TTL ဗီဒီယိုကိုထောက်ပံ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Argosy အသစ်စက်စက်အရောင်းမြှင့်ကိုဗြိတိန်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဒုတ်မှာအခြေခံအဆောက်အအုံအဆင့်မြှင့်မှုများအတွက် TTL ဗီဒီယိုထောက်ပံ့
Argosy အသစ်စက်စက်အရောင်းမြှင့်ကိုဗြိတိန်ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲဒုတ်မှာအခြေခံအဆောက်အအုံအဆင့်မြှင့်မှုများအတွက် TTL ဗီဒီယိုထောက်ပံ့
တိုက်ရိုက်ကူညီပံ့ပိုးရန် Argosy ထောက်ပံ့ရေးနောက်ဆုံးပေါ်အသံနှင့်ဗီဒီယို cabling HD နှင့် 4K အဆိုပါ 2019 / 2020 ရာသီအတွက်ပရီးမီးယားလိဂ်ပူးပေါင်း stadia ကနေထုတ်လွှင့်
ကြာမြင့်စွာ CRENDON ဗြိတိန်, 07 သြဂုတ်လ 2019 - Argosy, အထုတ်လွှင့်, မီဒီယာနှင့် AV စနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရေးပါအခြေခံအဆောက်အအုံထုတ်ကုန်များ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဦးဆောင်ဗြိတိန်ထိပ်တန်းဘောလုံးဌာနခွဲသို့ဤလာမယ့်ရာသီအသစ်ရာထူးတိုးကလပ်များ၏အခြေခံအဆောက်အဦးဆောင်ကြဉ်းရန်, TTL ဗီဒီယို, အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အားကစား stadia စက်ရုံအထူးကုနှင့်အတူပူးပေါင်းပြီ, အလွန်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လွှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ။
TTL ဗီဒီယို, မီးနှောင့်နှေး triax cabling ၏ 30 + ကီလိုမီတာ၏ပြဌာန်းချက်ကထောက်ခံ, အဆုံးမှအဆုံးမှအစီမံကိန်းများစီမံခန့်ခွဲ SMPTE ဟိုက်ဘရစ် cabling နှင့် 8-လမ်း ဟများထံသွားရောက်ကာ Argosy ထံမှ cabling ။ အဆိုပါ cable ကို profile များကိုအဆိုပါပွဲစဉ်ကိုဖုံးလွှမ်းသူကိုနိုင်ငံတကာထုတ်လွှင့်များ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုအားဖြင့်၎င်း, ပွဲစဉ်ရက်ပေါင်းအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသော stadia မှာတပ်စွဲသောဦးဆောင်ဗြိတိန်ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်ယူနစ်အားဖြင့်မောင်းနှင်နေကြသည်။
"ကျနော်တို့အကျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုကူညီပေးနေ, ငါတို့အဘို့အပိုမိုင်သို့ သွား. သူ Argosy အသင်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ timescales မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်စတော့ရှယ်ယာကျင်းပရန်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အားဖြင့်မသာ, လွခဲ့ကြသည်," Stefan Bewsey, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အင်ဂျင်နီယာဆိုပါတယ် TTL ဗီဒီယိုမှာ။
"ဟုအဆိုပါပွဲစဉ်အပေါ် မူတည်. အဲဒီမှာတစ်ချိန်တည်းမှာအခြေခံအဆောက်အဦများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လွှင့် 15 မှတက်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မသာစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးပေးရမညျ, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင်အင်အားအကောင်းဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကအားလုံးကိုရာသီရင်ဆိုင်နေရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်မိတ်ဖက် Argosy ကဤစီမံကိန်းများအတွက်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုပါပဲ။ "
ရုံနွေရာသီမတိုင်မီ Argosy Draka ၏ 10km Higher-rate ကို CPR တန်းအပါအဝင်သုံး stadia သို့တပ်ဆင်မှုအတွက် TTL ဗီဒီယိုမှကေဘယ်လ်ကြိုးတစ်အကွာအဝေးကိုအပ် HD triaxial ဗီဒီယိုက cable ကို။ TTL ဗီဒီယိုကအကြံပြုဗြိတိန်မီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်စျေးကွက်အပေါ်ပထမဦးဆုံး triaxial cable ကိုသည်အတိုင်း, Draka ဖွငျ့ဤအလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ဗြိတိန်အတွက်ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Argosy ကိုလည်း၏ 14km ကိုအပ် SMPTE ထောက်ခံမှုမှကြေးနီများနှင့်အမျှင်ဓာတ်နှစ်မျိုးစပ်ကင်မရာကေဘယ်လ်, HD နှင့် 4K အချက်ပြမှုများ; triax ကြေးနီကင်မရာ cable ရဲ့ 8km - အလွန်ကောင်းစွာပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ harshest အတွက်ထုတ်လွှင့်အချက်ပြကာကွယ်ဖို့အဆင်ပြေအောင်; နှင့် 9km ၏ Belden 8-လမ်းကြယ်ပွင့်ကို Quad ဒီဂျစ်တယ်အသံဟာ Multicore cable ကိုတစ်ကြယ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ပြေးကွင်းပတ်လည် gantries နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုထဲမှာ installed အချက်ပြမှုများ, ထိခိုက်ဆူညံသံများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချရန်။
"ကျနော်တို့က 2005 ကတည်းက Argosy အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အတူတူကျနော်တို့မှပြောင်းရွှေ့အပါအဝင်, အားကစားအတွင်းထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အတွက်သုံးသည့်အဓိကဆိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ကြ HD, မျိုးစုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်ဖို့ Single-ထုတ်လွှင့်တပ်ဆင်ထံမှ stadia ၏ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် 4K ဖို့ပြောင်းရွှေ့, "Bewsey ဆက်ပြောသည်။ "ဒါကနောက်ဆုံးပေါ်စီမံကိန်းကို Argosy ရဲ့အသိပညာ, အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်တိုတောင်းခဲကြိမ်အခြေခံအဆောက်အအုံချောမွေ့နှင့်စပ်ရာမရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်အောင်ဘယ်လိုများစွာသောသာဓကဖြစ်၏။ "
"သူတို့အားကစားကွင်းရှိ TTL ဗီဒီယိုနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအလုပ်လုပ် Argosy သည်အခြားအခြေခံအဆောက်အဦများပေးသွင်းကျော်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ပေးသည်တည်ဆောက်။ ဤကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်နှင့်အတူကျနော်တို့ရှေ့ဆက်စျေးကွက်၏ကောင်းစွာနေဖို့နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အလွန်အစောပိုင်းအပေါ်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်, "က Chris Smeeton, Argosy မှာဒါရိုက်တာကဆက်ပြောသည်။ "ကျနော်တို့ကဤကဲ့သို့သောဂုဏ်သတင်းစီမံကိန်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြဖို့အလွန်အမင်းဂုဏ်ယူပါ။ "
အဆိုပါကုမ္ပဏီကနိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရုပ်မြင်သံကြားအဆောက်အဦ၏ထောက်ပံ့ရေးအတွက်နောက်ခံနှင့်အတူ 1986 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ TTL ဗီဒီယို, Ltd ယခုအင်္ဂလိပ်ထိပ်တန်းဌာနခွဲဘောလုံး stadia အပါအဝင်အားကစားကွင်းမှပြင်ပအသံလွှင့် cabling နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများဗြိတိန်ရဲ့ဗွေဆော်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်နယ်ပယ်ယူထားသော။ ဒါဟာကင်မရာ, အသံ, ဒေတာ, ဗီဒီယိုနှင့်ဖိုင်ဘာ cabling အပြည့်အဝအကွာအဝေးအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောဂိုးလိုင်းနည်းပညာနှင့်ကစားသမားခြေရာခံခြင်းအဖြစ်အထူးကုအဆောက်အဦဖုံးလွှမ်း။ www.ttlvideo.com
4K Argosy အသံနှင့်ဗီဒီယို cabling Belden ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ cabling ခရစ် Smeeton ကြေးနီနှင့်ဖိုက်ဘာဟိုက်ဘရစ်ကင်မရာကို cable ကို Draka HD အခြေခံအဆောက်အဦများအဆင့်မြှင့်တင် MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ပရီးမီးယားလိဂ် Stefan Bewsey triaxial ဗီဒီယိုက cable ကို TTL ဗီဒီယို တီဗီနည်းပညာ ဗြိတိန်ဘောလုံးဌာနခွဲ 2019-08-12
ယခင်: ဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့ AI အ-powered အကြောင်းအရာ Discovery ပလက်ဖောင်းပွဲဦးထွက်မှ Vionlabs
နောက်တစ်ခု: နွေရာသီ Internship Program ကို - Preform ရုပ်ရှင်ပွဲတော် & Audio Post ကိုထုတ်လုပ်မှု